जुन उपायहरु मैले तिमीहरुको निम्ती गरेको छु ती म जान्दछु – यर्मिया – २९:११ | Nepali Christians
जुन उपायहरु मैले तिमीहरुको निम्ती गरेको छु ती म जान्दछु – यर्मिया – २९:११
September 16, 2014 1:25 pm by: Admin Category: Sermons A+ / A-
के तपाईको जिवनमा दु:ख कष्ट अनि अभावले दिन रात तपाईलाई सताई हरेको छ ? चारै तिर निराशा अनि अन्धकार छाए झै लागी रहेको छ ? रातको निन्द्रा अनि दिनको भोख हराएको छ ? जति प्रार्थना गरे पनि पर्मेश्वरले तपाईको प्रार्थनालाई अनसुना गरी रहेको छ ? कि तपाईलाई आफ्नु जिवन नै बोझ सरह लागी रहेको छ ? यदि तपाई कसै यस्तो स्थीनिसँग जुझि रहनु भएको छ भने कृपया निराश नहुनु होस् बरु यो बचन माथि पुर्ण रुपले भरोसा पर्नु होस् !
जुन उपायहरु मैले तिमीहरुको निम्ती गरेको छु ती म जान्दछु !
ती तिमीहरुको भलाईको निम्ती हुन तर बुराईको निम्ती होइन
तिमीहरुको भविश्य सुधार्न र एउटा आशा दिनलाई हो !
( यर्मिया – २९:११ )
यी बचनबाट एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ कि जुन यो कष्टमय स्थीति आज हामी कसैको जिवनमा आएको छ त्यो शैतानले होइन पर्मेश्वर स्वँयले हामीलाई दिनु भएको छ तर सजाको रुपमा होइन तर हामीलाई सुधार्नको निम्ती हो किनकि —
हुन पनि जुन पर्मेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नु भयो कि आफ्नु एकलौता पुत्र पनि हाम्रो निम्ती बलिदान गरी दिनु भयो ! यति सुन्दर सँसार दिनु भयो ! यस्तो अनमोल जिवन दिनु भयो अनि सबै भन्दा बडी स्वर्गको अनन्तको जिवन पनि दिनु भयो तर पर्मेश्वरको यति ठुलो कृपालाई हामीले भुलेको छौ ! हेलचेक्री गरेको छौ ! हामी दिन दिनै अट्टेरी – ढिट अनि अहँकारी भएको छौ ! हामी कति स्वार्थी – कति बैगुणी अनि कति निर्दयी पनि भएको छौ जसले पर्मेश्वरको प्रेम अनि बलिदानको कहिले महत्व बुझ्न सकेको छैनौ यदि बुझ्न सकेको भए आज बाईबलमा यो बचन नै हुने थिएन होला शायद !
उँहाको ईच्छा अनुसार हामी कहिले चलेनौ ! तर आफ्नै जिद्दमा – आफ्नै सोचाईमा अनि आफ्नै चालमा चली रहयौ ! आफुलाई जे सही लाग्छ त्यो गर्छौ जुन सहि लाग्दैन त्यो गर्दैनौ ! हामीले हाम्रो जिवन पुर्ण रुपले पर्मेश्वरको इच्छा अनुसार जिई रहेको छैनौ तर आफ्नै ईच्छा अनुसार जिई रहेको छौ ! पर्मेश्वरले नगर्नु भनेको कुरा गरर्यौ अनि गर्नु भनेको कुरा गरेनौ यसैले दिन दिनै हामी मानिस पर्मेश्वर देखि टाडिन्दै जान थाल्यौ यसैले पर्मेश्वरले हाम्रो आँखा खोल्नको निम्ती साथै चेतावनीको निम्ती हाम्रो जिवनमा यस्तो सँकट या कष्टहरु आउन दिनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो बचनबाट बुझ्न सक्छौ !
तर हरेश नखाँउ बरु नम्र भएर पर्मेश्वरको अघि पश्च्यतापी मन लिएर उँहालाई पुकारा गरौ ! तबसम्म पुकारा गरौ जब सम्म पर्मेश्वरले जवाव दिनु हुन्न् ! हाम्रो पर्मेश्वर दयालु अनि महान हुनु हुन्छ जब पश्च्यतापी मनले हामीले उँहालाई पुकारा गर्छौ उँहाले सुन्नु हुन्छ ढिलै सहि जवाव आवश्यै दिनु हुन्छ ! तर उप्रान्त पर्मेश्वरलाई चोट पुग्ने अनि क्रोध आउने कुरो देखि टाडा रहौ ! उँहाले हाम्रो निम्ती सुन्दर सुन्दर योजनाहरु बनाउनु भएको छ त्यो योजना जान्ने कोशिष गरौ !
भुगोल – बिज्ञानले खोजि निकालेको योजना जान्ने इच्छा राख्न्नु भन्दा बरु सँसारको सृष्टीकर्ताले हाम्रो निम्ती योजना बनाएर राख्नु भएको छ बरु यो कुरा जान्नु जरुरी होइन र ? यसैले मेरो त यहि सुझाव छ भुगोल र बिज्ञानको साहारा लिएर शैतानले जुन चाल चली सबैलाई लट्टाई राखेको छ त्यो भ्रमबाट आफुलाई मुक्त गराउ अनि सारा तन मन अनि शरीरमा भए भरको शति लगाएर पर्मेश्वरको इच्छा अनि योजना जान्नमा आफ्नु समय लगाँउ ! पर्मेश्वरलाई सारा हृदयले प्रेम गरौ – उँहाको डर मानेर पवित्र जिवन जियौ अनि पर्मेश्वरबाट आशिस पाँउ किनकि पर्मेश्वरको आशिष बिना हाम्रो जिवन मरुभुमिको तृष्णा झै हुन्छ ! जुन मानिसको मन सँसारको सुख – आनन्द – धन दौलत अनि नाम कमाउने चाहमा भागेको हुन्छ त्यो मानिस पर्मेश्वरको अशिस देखि बँचित हुन्छ जसको फलस्वरुप त्यो मानिसले पर्मेश्वरको अनुग्रह गुमाउन पर्छ यसैले यस्तो मान्छेको जिवनमा अभाव – दु:ख बिमार – परिवारमा अशान्ती भैइ नै रहन्छ अनि एक पछि एक समस्याले कहिले छोड्दैन ! प्रभुको शान्ती अनि अनुग्रहको बिना त आधा नर्क यहि जिवनमा नै छ !
प्रभु भन्नु हुन्छ – हामीले के खाँउला अनि के पियौला भनी आफ्नु प्राणको निम्ती फिक्री नगर !
तर पहिले पर्मेश्वरको राज्य र उँहाको धर्मिक्ताको खोजि गर र
यी सबै थोक तिमीहरुलाई थपिनेछ ( मति – ६:३३ ) !
कति सच्चाई छ यो बचनमा – जुन बचनको मिठो स्वाद मैले चाखी सकेको छु ! जब हामीले सँसारको कुनै पनि कुरोको चाह नराखी केवल अनि केवल पर्मेश्वरको निम्ती जिवन जिउँछौ तब पर्मेश्वरले आफ्नु प्रतिज्ञा अनुसार हामीलाई यो जिवन निर्वाह गर्नलाई चाहिने सबै थोक जुराई दिनु हुन्छ त्यति मात्रै नभएर कल्पनै नगरेको कुरोहरु पनि आफै आफ थपेर दिनु हुन्छ मागी रहन पनि पर्देन !
हे परम प्रभुकोजन हो उँहाको भय मान किनकि
उँहाको डर मान्नेहरुलाई कुनै कुराको खाँचो हुन्दैन !
( भजन सँग्रह ३४:९ ) !!!!!!
कृपया पर्मेश्वर माथि भरोसा गर्न सिकौ ! यहि मेरो सुझाव छ यहि बिन्ती पनि !
प्रभुको शान्ती हामी सबैमा रहेको होस् !
जुन उपायहरु मैले तिमीहरुको निम्ती गरेको छु ती म जान्दछु – यर्मिया – २९:११ Reviewed by Admin on Sep 16 . के तपाईको जिवनमा दु:ख कष्ट अनि अभावले दिन रात तपाईलाई सताई हरेको छ ? चारै तिर निराशा अनि अन्धकार छाए झै लागी रहेको छ ? रातको निन्द्रा अनि दिनको भोख हराएको छ ? के तपाईको जिवनमा दु:ख कष्ट अनि अभावले दिन रात तपाईलाई सताई हरेको छ ? चारै तिर निराशा अनि अन्धकार छाए झै लागी रहेको छ ? रातको निन्द्रा अनि दिनको भोख हराएको छ ? Rating: 0
Realize गर्नु होस ।...प्रभुमा सँधै आनन्द गर !!...